ဘယျအကဟာ ကိုယျအလေးခြိနျကဖြို့အတှကျအကောငျးဆုံးလဲ? - Lifestyle Myanmar
ပြိုမတေို့ရေ…cardio ကစားရမှာ၊ ပွေးရမှာ၊ gymဆော့ရမှာကို ပငျြးနသေလား? ပွောငျးလဲမှုတဈခြို့ကို ရှာဖှနေသေလား? ပြိုမတေို့မှာ ဝိတျလညျးခခြငျြတယျ။ ဒီလိုအားကစားလုပျရမှာလညျး ပငျြးနတေယျဆိုရငျ နညျးလမျးကောငျးတဈခြို့ကို မြှဝပေေးမယျနျော။
ပြိုမတေို့မှာ ဝိတျလညျးကခြငျြတယျ၊ ကိုရီးယားမလေးတှလေို လှလှပပလေးတှေ ဝတျခငျြတဲ့ စိတျကူးရှိမှာပါ။ ဒီစိတျကူးတှကေို အကောငျအထညျဖျောဖို့ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျစရာမလိုပါဘူး။ ပြိုမတေို့အနနေဲ့ ကခုနျရတာကို နှဈသကျမှာပါနျော။ ကခုနျခွငျးက ကိုယျအလေးခြိနျကို လြော့ကစြပွေီး ကိုယျကာယကွံ့ခိုငျမှုကို တိုးတတျစတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးပုံစံတဈခုဖွဈကွောငျး ကနျြးမာရေးကြှမျးကငျြသူမြားက အတညျပွုထားပါတယျ။ အကပုံစံအမြားကွီးရှိတာကွောငျ့ ဘယျအက ကကိုယျအလေးခြိနျကဖြို့အတှကျ အကောငျးဆုံးလဲဆိုတာကို ပွောပွပေးပါမယျ။
Zumba အကဟာ အရေိုးဗဈလှုပျရှားမှုနှငျ့အတူ ရောနှောပေါငျးစပျထားတဲ့ အကပုံစံတဈခုဖွဈပါတယျ။ Zumba အကဟာ မွူးကွှဖှယျဂီတနှငျ့အတူ ပြျောစရာကောငျးတဲ့ ကကှကျတှနေဲ့ ကရတာဖွဈတာကွောငျ့ လူအတျောမြားမြား နှဈသကျကွပါတယျ။ Zumba အတနျးတှကေို အမြားအားဖွငျ့ fitness clubs တှေ၊ gymsတှမှော တတျလို့ရပါတယျ။ ဒီအရေိုးဗဈလကေ့ငျြ့ခနျးပုံစံက ခန်ဓာကိုယျတခုလုံး ကနျြးမာကွံခိုငျဖို့အတှကျ အထူးကောငျးမှနျပါတယျ။ ဒီ ဇနျဘာလကေ့ငျြ့ခနျးကို တဈပတျမှာ အနညျးဆုံး ၃-၄ရကျပွုလုပျဖို့ အကွံပွုပါတယျ။
Hip-Hopအကစတိုငျက လမျးပျေါမှာကခုနျဖို့ ရညျညှနျးတာပါ။ ဒီအကပုံစံက Hip-Hop ဂီတနှငျ့အတူ ဖြျောဖွရေတာပါ။ ဒီအကဟာ ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးကို ပဈမှတျထားတာကွောငျ့ စှမျးအငျမွငျ့မားနဖေို့ လိုအပျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ဝမျးဗိုကျကွှကျသားကို သနျမာစဖေို့ ကူညီပေးတဲ့ ခါးနှငျ့တငျပါးဧရိယာမှာ အမြားစု လှုပျရှားရတဲ့ အကပုံစံဖွဈတာကွောငျ့ Hip-Hop ဆိုတဲ့ နာမညျကိုပေးထားခွငျး ဖွဈပါတယျ။ Youtube ဗီဒီယိုကွညျ့ရငျး ကတာပဲဖွဈဖွဈ၊ fitness club တဈခုမှာကတာပဲဖွဈဖွဈ ကယျလိုရီ ၃၀၀-၄၀၀ လောငျကြှမျးဖို့ အနညျးဆုံး ၁နာရီလောကျ ကသငျ့ပါတယျ။
၃။ Indian Classical Dance
အိန်ဒိယအကကလညျး ကယျလိုရီတှကေို လောငျကြှမျးစပွေီး စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ကနျြးမာရေးကို လှုံ့ဆျောပေးနိုငျပါတယျ။ ကခုနျတဲ့ပုံစံအမြားစုက နှလုံးနှငျ့ အဆုတျကို သကျရှညျကနျြးမာစတေဲ့ နှလုံးသှေးကွောဆိုငျရာခံနိုငျရညျ တညျဆောကျခွငျးကို ကူညီပေးပါတယျ။ ပေါငျနှငျ့ ခွသေလုံးကွှကျသားမြား၊ ခွလေကျအင်ျဂါအောကျပိုငျးကိုသနျမာစခွေငျးမှာ ကောငျးမှနျတဲ့ အကဖွဈပါတယျ။ ခွဖေဝါး၊ လညျပငျး၊ လကျကောကျဝတျ၊ အပျေါကိုယျထညျနှငျ့ ခွထောကျတှအေားလုံးရဲ့ လှုပျရှားမှုတှလေညျး ပါဝငျပါတယျ။ အိန်ဒိယအကဟာ သှေးလညျပတျမှုစနဈကို တိုးတတျစပွေီး ခန်ဓာကိုယျကွှကျသားတှကေို အကူအညီဖွဈစပေါတယျ။
၄။ Salsa dance
လကျတငျအမရေိကနျအကပုံစံက sensual လကေ့ငျြ့ခနျးပုံစံတဈခုဖွဈပွီး ကခုနျဖို့ ပါတနာတဈဦး လိုအပျပါတယျ။ ဆဲလျဆာအကဟာ 1,2,3,4,5,6,7,8ဆိုတဲ့ တိုငျပငျရှဈခုနှငျ့အတူ ခွေ ၆လှမျး လှမျးရတဲ့ပုံစံ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအကကို တဈနေ့ တဈနာရီလောကျ ပုံမှနျလကေ့ငျြ့သှားရငျ ကယျလိုရီ ၄၀၀-၅၀၀ ခနျ့ကို လောငျကြှမျးနိုငျပါတယျ။
သငျယခု ဘယျအက ကမယျလို့ ဆုံးဖွတျထားပါသလဲ? သငျ့မှာ ခန်ဓာကိုယျအောကျပိုငျး ပိုလေးလံရငျ ဟဈဟော့နှငျ့ အိန်ဒိယအကပုံစံက အကောငျးဆုံးရှေးခယျြမှုဖွဈပွီး ခန်ဓာကိုယျမှာ ပွညျ့နတေဲ့ အဆီတှလေောငျကြှမျးခငျြရငျတော့ ဇနျဘားအကဟာ ပိုပွီးထိရောကျပါတယျ၊ ဝိတျကခြငျြတဲ့ ပြိုမတေို့ရေ…ယခုပဲ မွူးကွှတဲ့ ဂီတနှငျ့အတူ လှုပျရှားမှုတဈခြို့နဲ့ ပြျောပြျောကွီး ကလိုကျပါနျော။
ပျိုမေတို့ရေ…cardio ကစားရမှာ၊ ပြေးရမှာ၊ gymဆော့ရမှာကို ပျင်းနေသလား? ပြောင်းလဲမှုတစ်ချို့ကို ရှာဖွေနေသလား? ပျိုမေတို့မှာ ဝိတ်လည်းချချင်တယ်။ ဒီလိုအားကစားလုပ်ရမှာလည်း ပျင်းနေတယ်ဆိုရင် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ချို့ကို မျှဝေပေးမယ်နော်။ ပျိုမေတို့မှာ ဝိတ်လည်းကျချင်တယ်၊ ကိုရီးယားမလေးတွေလို လှလှပပလေးတွေ ဝတ်ချင်တဲ့ စိတ်ကူးရှိမှာပါ။ ဒီစိတ်ကူးတွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ပျိုမေတို့အနေနဲ့ ကခုန်ရတာကို နှစ်သက်မှာပါနော်။ ကခုန်ခြင်းက ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျော့ကျစေပြီး ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုကို တိုးတတ်စတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများက အတည်ပြုထားပါတယ်။ အကပုံစံအများကြီးရှိတာကြောင့် ဘယ်အက ကကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးပါမယ်။
Zumba အကဟာ အေရိုးဗစ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ ရောနှောပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အကပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Zumba အကဟာ မြူးကြွဖွယ်ဂီတနှင့်အတူ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ကကွက်တွေနဲ့ ကရတာဖြစ်တာကြောင့် လူအတော်များများ နှစ်သက်ကြပါတယ်။ Zumba အတန်းတွေကို အများအားဖြင့် fitness clubs တွေ၊ gymsတွေမှာ တတ်လို့ရပါတယ်။ ဒီအေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံက ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံး ကျန်းမာကြံခိုင်ဖို့အတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒီ ဇန်ဘာလေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်ပတ်မှာ အနည်းဆုံး ၃-၄ရက်ပြုလုပ်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
Hip-Hopအကစတိုင်က လမ်းပေါ်မှာကခုန်ဖို့ ရည်ညွှန်းတာပါ။ ဒီအကပုံစံက Hip-Hop ဂီတနှင့်အတူ ဖျော်ဖြေရတာပါ။ ဒီအကဟာ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ပစ်မှတ်ထားတာကြောင့် စွမ်းအင်မြင့်မားနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားကို သန်မာစေဖို့ ကူညီပေးတဲ့ ခါးနှင့်တင်ပါးဧရိယာမှာ အများစု လှုပ်ရှားရတဲ့ အကပုံစံဖြစ်တာကြောင့် Hip-Hop ဆိုတဲ့ နာမည်ကိုပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Youtube ဗီဒီယိုကြည့်ရင်း ကတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ fitness club တစ်ခုမှာကတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကယ်လိုရီ ၃၀၀-၄၀၀ လောင်ကျွမ်းဖို့ အနည်းဆုံး ၁နာရီလောက် ကသင့်ပါတယ်။
အိန္ဒိယအကကလည်း ကယ်လိုရီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကခုန်တဲ့ပုံစံအများစုက နှလုံးနှင့် အဆုတ်ကို သက်ရှည်ကျန်းမာစေတဲ့ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာခံနိုင်ရည် တည်ဆောက်ခြင်းကို ကူညီပေးပါတယ်။ ပေါင်နှင့် ခြေသလုံးကြွက်သားများ၊ ခြေလက်အင်္ဂါအောက်ပိုင်းကိုသန်မာစေခြင်းမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အကဖြစ်ပါတယ်။ ခြေဖဝါး၊ လည်ပင်း၊ လက်ကောက်ဝတ်၊ အပေါ်ကိုယ်ထည်နှင့် ခြေထာက်တွေအားလုံးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အိန္ဒိယအကဟာ သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ကို တိုးတတ်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေကို အကူအညီဖြစ်စေပါတယ်။
လက်တင်အမေရိကန်အကပုံစံက sensual လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကခုန်ဖို့ ပါတနာတစ်ဦး လိုအပ်ပါတယ်။ ဆဲလ်ဆာအကဟာ 1,2,3,4,5,6,7,8ဆိုတဲ့ တိုင်ပင်ရှစ်ခုနှင့်အတူ ခြေ ၆လှမ်း လှမ်းရတဲ့ပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကကို တစ်နေ့ တစ်နာရီလောက် ပုံမှန်လေ့ကျင့်သွားရင် ကယ်လိုရီ ၄၀၀-၅၀၀ ခန့်ကို လောင်ကျွမ်းနိုင်ပါတယ်။
သင်ယခု ဘယ်အက ကမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါသလဲ? သင့်မှာ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်း ပိုလေးလံရင် ဟစ်ဟော့နှင့် အိန္ဒိယအကပုံစံက အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပြည့်နေတဲ့ အဆီတွေလောင်ကျွမ်းချင်ရင်တော့ ဇန်ဘားအကဟာ ပိုပြီးထိရောက်ပါတယ်၊ ဝိတ်ကျချင်တဲ့ ပျိုမေတို့ရေ…ယခုပဲ မြူးကြွတဲ့ ဂီတနှင့်အတူ လှုပ်ရှားမှုတစ်ချို့နဲ့ ပျော်ပျော်ကြီး ကလိုက်ပါနော်။